Mmanụ dị mkpa iji gbuo Germs - mmanụ dị mkpa n'ahịa | AromaEasy
Nke a bụ ntụziaka dị mkpirikpi AromaEasy banyere mmanụ dị mkpa iji gbuo nje
N'oge ndị a siri ike, anyị niile chọrọ iwepụ n'ụlọ anyị nke nje na nje.
Ọtụtụ na-ejikarị ngwaahịa nhicha dị iche iche eme ihe. Agbanyeghị, ụfọdụ ndị na-ekpocha kemịkal nwere ike imebi ihe karịa ihe ọma.
Nhọrọ nke okike? Can nwere ike igbochi nje bacteria na nje nje na mmanụ dị mkpa kama. Mmanụ ndị a na-egbochi nje virus nwere ike inyere aka bulie ọnọdụ gị. Ha nwekwara ike inye aka na mgbake ngwa ngwa!
N’ebe a bụ mmanụ kacha mma isii kacha mkpa iji gbuo ụmụ nje.
The 6 Best Mkpa mmanụ
1. Osisi tii
Tii tii dị mkpa mmanụ na-enye aka n'igbu nje na-efe efe na ikuku. E wezụga, tii osisi mkpa mmanụ na-egbu ebu na ya eke antiseptik na mgbochi fungal Njirimara.
Gbalịa mmanụ osisi tii na-agwọ ọrịa fungi, gbochie uto nke ebu, ma kpochapụ nje na nje.
Iji mepụta uzommeputa antibacterial dị ike karị, jikọta ya na eucalyptus mmanụ dị mkpa. Nke a dị mkpa mmanụ ngwakọta na-eche igbu E. coli na-alụ ọgụ staph nje.
Mpekere dị mkpa nwere mgbochi nje na antifungal Njirimara. Nwere ike ịchọta ya na ịhịa aka n'ahụ na ude anụ ahụ iji belata mgbaàmà nke oyi na-atụkarị. Studiesfọdụ ọmụmụ na-egosi na pepemint mkpa mmanụ na-egbu ọtụtụ ụdị nke nje na dịkwa ka usoro ha.
Na antifungal, antiviral, na antibacterial atụmatụ, pepemint mkpa mmanụ bụ pụtara ìhè ngwá ọrụ mbo mbuli gị dịghịzi usoro. Pepemint nwere mejupụtara dị ka camphor, carvacrol, na menthol. Ogige ndị a dị na mmanụ dị mkpa na-eguzogide ọtụtụ nje ndị dị ize ndụ dị ka E. coli na salmonella.
Na mgbakwunye, pepemint bụ otu n'ime mmanụ dị mkpa iji mee ka ikuku dị ọcha na oghere gị. Pepemint mmanụ dị mkpa dị irè na iwepu ụmụ nje. Mmanụ a dị mkpa nwere isi ọhụụ, nke na-atọ ụtọ ma na-ewuli elu.
Lemọn mmanụ dị mkpa bụ pụtara ìhè Cleaner na antifungal, antibacterial na antiviral Njirimara. You nwere ike iji lemon mmanụ dị mkpa maka ịsachasị igwe, efere, uwe, yana ahụ.
Iji mee nhicha ụlọ, tinye lemon mmanụ dị mkpa na ọcha ma ọ bụ cider mmanya iji gbuo nje. Ọzọkwa, ị nwere ike disinfect gị uwe site na-agbakwunye ụfọdụ tụlee nke lemon mkpa mmanụ na-asacha okirikiri.
Mara: I kwesiri ị kpachapụ anya oge niile mgbe ị na-eji mmanụ lemon mmanụ. Dị ka mmanụ citrus ndị ọzọ dị mkpa, lemon nwere ike ibute ọgbụgba ọkụ. N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, ejila mmanụ citrus laa n’èzí n’anwụ.
Na ike camphor ọdịnaya, eucalyptus mmanụ dị mkpa nwere nje na-egbu egbu iji gbuo nje. Njirimara ndị a na-eme ka eucalyptus zuru oke maka ịlụso ọrịa ọgụ, nje bacteria, yana nje.
Ke adianade do, eucalyptus mkpa mmanụ si germicidal àgwà na-eme ka ọ a disinfectant. Ya mere eucalyptus dị mma maka ịnagide ọkụ, ọnya, ọnya, ọnya, na ọnyá.
Mix eucalyptus mkpa mmanụ na tii osisi na-eme ka ihe kasị germicide ihicha ngwọta maka igbu germs.
Nyefee mmanụ dị mkpa bụ ihe a pụrụ ịdabere na nje nje. Mmanụ a dị mkpa na-enyere aka iguzogide ọrịa na nje virus site na imeziwanye usoro ahụ gị.
Dị ka a n'ihi nke ya disinfectant na mgbochi nje na àgwà, lavender mkpa mmanụ na-eje ozi n'ịgwọ ọtụtụ anụ ọrịa. Dịka ọmụmaatụ, Lavender na-enyere aka belata psoriasis, acne, na ọnọdụ ndị ọzọ na-afụ ụfụ nke anụ ahụ. Mmanụ a dị mkpa na-enye aka ịkwụsị ọrịa ahụ na ọnyá, ọnya, na ọkụ.
Cinnamon bụ incredibly antibacterial mmanụ dị mkpa. Mmanụ a dị mkpa nwere cinnamaldehyde, ihe eji eme ihe maka ọgwụgwọ ọtụtụ ọrịa. Na ule akpa, cinnamon mmanụ dị mkpa na-egbu ọtụtụ ụdị ero, nje, na nje bacteria.
AromaEasy nwere oke dị elu dị elu, 100% mmanụ dị ezigbo mkpa maka United States. A na-ewepụta mmanụ niile dị mkpa na osisi ọgwụgwọ na mpaghara mpaghara.
Otu esi eji mmanụ dị mkpa iji gbuo Germs
E wezụga mmanụ ndị a dị mkpa iji gbuo nje, e nwere ụzọ ndị ọzọ dị irè iji lụso nje bacteria ọgụ.
Ihe nhicha nke ụlọ iji gbuo nje na elu
Tinye ihe dị ka mmiri 250ml dị ọcha na karama ịgba
Gbakwunye mmanụ 25 dị mkpa iji gbuo nje
Raygba ngwakọta a ma hichapụ ebe niile n'ụlọ gị, ụlọ ọrụ gị, na ụgbọ ala gị
Ọzọkwa, ịnwekwara ike iji uzommeputa mmanụ a dị mkpa na usoro ị ga-eji kpochapụ ala gị.
Agbasa mmanụ dị mkpa iji mee ka ikuku dị ọcha
Iji mee ka nje na ero dị ọcha site na ikuku, gbasaa ihe gbasara 3-5 nke mmanụ dị mkpa na an mkpa mmanụ diffuser. Ma i nwere ike ịgbasa mkpa mmanụ enweghị mmiri via onye na –eme ka ihe na –eme ka aru di nma.